Celestamine (ဆီလီစတက်မင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Celestamine (ဆီလီစတက်မင်း)
Celestamine (ဆီလီစတက်မင်း) ကဘာလဲ။
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့် သတိပေးချက်များကို သိရှိခြင်း
Generic Name: Celestamine (ဆီလီစတက်မင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Celestamine ကိုဘာအတွက် အသုံးပြုတာလဲ။
ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊ အရေပြား ပြဿနာနှင့် အရေပြား ဓါတ်မတည့်ခြင်း စတဲ့ အခြေအနေအတွက် တော်တော်များများ အသုံးပြုပါတယ်။
Celestamine ကို ဘယ်လို သောက်သုံးသင့်သလဲ။
သောက်ဆေး အပြားလေးတွေအဖြစ်နဲ့ လာတာပါ။ အိမ်ရာဝင်ချိန်မှာ အစာနဲ့ တွဲသောက်သင့်ပါတယ်။
Celestamine ကို ဘယ်သိမ်း ထားရမလဲ။
Celestamine ကို နေရောင်ခြည် နဲ့ အစိုဓါတ်တွေကနေ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး အခန်းအပူချိန်မှာ သိမ်းတာအကောင်းဆုံးပါ။ ရေချိုးခန်းနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ Celestamine က တံဆိပ် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိသလို ထိန်းသိမ်းပုံလည်း အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဆေးပေါ်မှာ ပါသော ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ အညွှန်းကို သေချာဖတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဘေးကင်းစေဖို့ ဆေးကိုတော့ ကလေးနဲ့ အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်တွေများမှ ဝေးဝေး ထားရပါမယ်။
မညွှန်ကြားထားဘူးဆိုရင်တော့ Celestamine ကို အိမ်သာမှ ရေဆွဲမချသင့်သလို မြောင်းထဲသို့လဲ မလွှင့်ပစ် သင့်ပါဘူး။ အသုံးမလိုတော့တဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်း ကုန်သွားတဲ့ အခါမှာ သေချာ စွန့်ပစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်သူများကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Celestamine မသုံးခင် ဘာတွေသိထာသင့် သလဲ။
အောက်ပါအကြောင်း အရာများ ဖြစ်နေပါက ဆရာဝန်အား အသိပေးပါ။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင် (သို့) နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်နေခြင်း။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ရှိနေစဉ် ဒါမှမဟုတ် နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးတွေကိုသာ သောက်သုံးသင့်လို့ပါ။
• အခြားသော ဆေးဝါများ သောက်သုံးနေခြင်း။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် မပါဘဲ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် ဆေးဝါးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
• Celestamine ပါဝင်ပစ္စည်းများ (သို့) အခြားသော Celestamine များဖြင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ မှိုရောဂါတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ Celestamine အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ဒါမှမဟုတ် နိုချိုတိုက်ကျွေးနေစဉ်မှာ ယင်းဆေးသောက်မယ်ဆိုရင် ဘေးကင်းပါ့မလား။
Celestamine သည် နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းကော နိုတိုက်ခါနီးကာလတွေမှာကော သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ဘေးကင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Corticosteroid က ရင်သွေးနဲ့ ကလေးကို ထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို နှောင့်နှေးစေပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ ကလေးအမေတစ်ယောက်ဆိုရင် Celestamine အသုံးမပြုခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတမ်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Celestamine က ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေမှာလဲ။
Celestamine က အောက်ပါဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
• အရေပြားဓါတ်မတည့်ခြင်းများ၊ အင်ပြင်များထွက်ခြင်း၊ အဖုအပိမ့်များ၊ နီရဲခြင်းများ၊ လည်ချောင်း၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာနဲ့ မျက်နှာတို့ ရောင်ရမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
• အမြင်မှုန်ဝါးခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဖောင်းကားခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ ဗိုက်မကောင်းခြင်း၊ ကတ္တရာစေးရောင် မစင်အမည်း များသွားခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခဲခြင်း၊ အစာအိမ် အပြင်းအထန် အောင့်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အလွယ်တကူအညိုအမဲစွဲခြင်း၊ ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း၊ ချွေးပိုထွက်ခြင်းနှင့် အသားအရေ ခြောက်ကပ်ခြင်း။
Celestamine နဲ့ ဘယ်ဆေးတွေ ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်သလဲ။
Celestamine က သင်အခုလောလောဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ပါဆေးဝါးများနဲ့ Celestamine တွဲ သောက်သုံးပါက ဓါတ်ပြုမှုတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။
Phenobarbital၊ phenytoin၊ rifampicin၊ ephedrine။ ထိုဆေးများက Celestamine ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြင့်တင်ပေးပါတယ်။
Cardiac glycosides ဆေးက နှလုံးစည်းချက်မမှန်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး digitalis ဆေးဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Coumarins၊ aspirin၊ NSAIDs နဲ့ ဆီးချိုကျဆေးများ
အစားအစာတွေနဲ့ အရက်တွေက Celestamine နဲ့ဓါတ်ပြုတာတွေ ရှိသလား။
Celestamine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လို ကျန်းမာရေး အခြေအနေမျိုးတွေက Celestamine အပေါ် သက်ရောက်နေသလဲ။
Celestamine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ
တီဘီရောဂါ၊ အရိုးပွခြင်း၊ ရေတိမ်၊ ရေယုန်၊ မျက်လုံးပိုးဝင်ခြင်း၊ အတွင်းတိမ်
လည်ပင်း သိုင်းရွိုက်ရောဂါ၊ အစာအိမ်ရောဂါများ ( အစာအိမ် အနာ၊ သွေးယိုစိမ့်ခြင်း အစရှိသဖြင့်) အူနံရံမှဖောင်းထွက်နေသော အိမ်ငယ် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အူအနာဖြစ်ပြီး ရောင်ခြင်း)
ရင်ဘတ် တင်းကျပ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဝေဒနာ၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်း။
အောက်ဖော်ပြမည့် အကြောင်းအရာသည် ဆေးပညာအကြံပေးချက်များအတွက် အစားထိုးမဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် အမြဲတမ်း ဆရာဝန်၊ ကျွမ်းကျင်သူတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် သောက်နိုင်တဲ့ Celestamine ပမာဏ။
လူကြီးနဲ့ ကလေးများ( ၁၂နှစ်အထက်)။ ၁ပြားကနေ ၂ပြား (သို့) လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁-၂ဇွန်း ကို တစ်နေ့ လေးကြိမ်။ အများဆုံး- တစ်နေ့ ၈ပြား(သို့) လက်ဖက်ရည်ဇွန်း။
ကလေးတွေအတွက် သောက်ရမယ့် Celestamine ပမာဏက ဘယ်လောက်လဲ။
ကလေး ၆-၁၂ နှစ်။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်(သို့) ဆေးတစ်ဝက် ပမာဏကို တစ်နေ့ ၃ကြိမ်။ အများဆုံး တစ်နေ့ ၄ ပြား (သို့) လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ ဇွန်း ။
ကလေး ၂-၆ နှစ်။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက် ဒါမှမဟုတ် လေးပုံတစ်ပုံ ကို တစ်နေ့ ၃ကြိမ်။ အများဆုံး တစ်နေ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်း
Celestamine ကို ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ ရရှိနိုင်သလဲ။
Celestamine ကို အောက်ပါ ပုံစံတွေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလွန်သွားပြီဆိုရင်တော့ ဆေးရုံကားခေါ်ပါ ဒါမှမဟုတ် နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့ သွားပါ။
ဆေးသောက်ဖို့ လွတ်သွားရင် ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ။
Celestamine သောက်ဖို့ လွတ်သွားမယ်ဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ပြန်သောက်ပါ။ နောက်ထပ်ဆေးသောက်ဖိုအချိန်နဲ့ နီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့ ဆေးကို လွှတ်လိုက်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်သွားပါ။ ဆေးကို နှစ်ခါမသောက်ပါနှင့်။
Celestamine. http://www.mims.com/philippines/drug/info/celestamine?type=full. Accessed September 25, 2016.